ရည္မွန္းခ်က္ဆိုတာ ဘာလဲ?? – Gentleman Magazine
[sg_popup id=”6″ event=”onload”][/sg_popup]ရည္မွန္းခ်က္ဆိုတာ ဘာလဲ??
လူတိုင်းမှာ ရည်မှန်းချက်ကိုယ်စီရှိတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရည်မှန်းချက်တွေ အကောင်အထည်ပေါ်လာတဲ့သူကတော့ ရှားပါလိမ့်မယ်။
တကယ်တော့် ရည်မှန်းချက်ဆိုတာ အချိန်တိုင်း၊ နေ့ရက်တိုင်း ထက်သန်တက်ကြွစွာ ဖြစ်တည်နေတဲ့ လိုလားတောင့်တမှု ဖြစ်ပါတယ်။
လူအများစုအတွက်ကတော့ ရည်မှန်းချက်တွေက လျို့၀ှက်ဆန်းကြယ်မှုတစ်ခုပါပဲ။ အဘိဓာန်အများစုကတော့ ရည်မှန်းချက်ရဲ့အဓိပ္ပါယ်ကို ထက်သန်တဲ့စိတ်လိုအင်ဆန္ဒလို့ ဖွင့်ဆိုကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ထက်သန်တဲ့စိတ်ဆိုတာကရော ဘာဖြစ်မလဲ။ ကလေးတွေက မွေးနေ့ပွဲကျင်းပရဖို့ စိတ်အားထက်သန်ကြတယ်။ မွေးနေ့ပွဲမှာဆိုရင် အားလုံးရဲ့အရေးပေးတာကို ခံရမယ်၊ လက်ဆောင်တွေအများကြီးရမယ်၊ အစားအသောက်တွေလည်း အများကြီးစားရမယ် ဒါ့ကြောင့် ကလေးတွေက မွေးနေ့ပွဲကျင်းပခွင့်ရဖို့ လိုလားတောင့်တကြပါတယ်။ လူကြီးတွေဆိုရင်ရော။ ဘောလုံးပွဲကြည့်ဖို့၊ သားသမီးတွေ အောင်မြင်ဖို့၊ မိတ်ဆွေဟောင်းကို တွေ့ရဖို့၊ ကားအသစ်တစ်စီးလောက် ၀ယ်နိုင်ဖို့ စသဖြင့် လိုလားတောင့်တမှုတွေ ရှိကြတာပါပဲ။ ဒီတော့ စိတ်အားထက်သန်မှုက ပျော်စရာတွေချည်းပဲလို့ ထင်ရပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာ လိုလားတောင့်တတဲ့အရာကို ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ အရည်အချင်းရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လိုချင်တာနဲ့ လိုလားတောင့်တတာက ကွာခြားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဖြစ်ချင်တဲ့ လိုအင်ဆန္ဒတွေက စစ်မှန်တဲ့လိုလားတောင့်တမှု ဖြစ်လာဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်လာဖို့အတွက် အဓိကလိုအပ်ချက်တော့ လိုအပ်တဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကို လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၀င်ငွေပိုကောင်းချင်တယ်၊ အပန်းဖြေခရီးသွားချင်တယ်၊ ဘ၀မှာ နည်းနည်းလောက်သက်တောင့်သက်သာ နေချင်တယ် စသဖြင့် လူတွေပြောတဲ့ စိတ်ဆန္ဒတွေကို ကြားဖူးကြမှာသေချာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့ စိတ်ဆန္ဒတွေ တကယ်ဖြစ်လာဖို့က ဖြစ်ချင်စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ မရပါဘူး။ ဖြစ်အောင်လုပ်ချင်တဲ့ လိုလားတောင့်တာမှု ရည်မှန်းချက်ရှိဖို့ လိုပါတယ်။ သူတို့သာ တကယ်ဖြစ်ချင်စိတ်ရှိတယ်ဆိုရင် TV ကြည့်ရင်း အချိန်ကုန်တဲ့အလုပ်မျိုးတွေကို လုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
စစ်မှန်တဲ့ ရည်မှန်းချက်က စည်းစနစ်ကျနပြီး ထက်သန်တဲ့ လိုလားတောင့်တာမှုကို ခေါ်ပါတယ်။ မနက်ဖြန်အစည်းအေ၀းအတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်ချင်ရင် ဒီနေ့မှာ ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်ရမယ်၊ သားသမီးတွေ ကျောင်းစရိတ်လုံလောက်အောင် ပေးချင်တယ်ဆိုရင် ဒီနေ့ကစပြီး ငွေစုရမယ်၊ မနက်ဖြန်မှာ ပိုကောင်းတဲ့ဘ၀ကို လိုချင်ရင် ဒီနေ့စပြီး အလုပ်ကြိုးစားရမယ် စသဖြင့် တကယ်စစ်မှန်တဲ့လိုလားတောင့်တမှုနဲ့ တကယ့်ရည်မှန်းချက်ထားပြီး လုပ်ဖို့ လိုပါတယ်။
ရည်မှန်းချက်ဆိုတာ အချိန်တိုင်း၊ နေ့ရက်တိုင်း ထက်သန်တက်ကြွာစွာဖြစ်တည်နေတဲ့ လိုလားတောင့်တမှုဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ဘ၀မှာ ပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစု၊ ကားအသစ်၊ ခမ်းနားတဲ့အိမ်၊ စိတ်ပူစရာမလိုတဲ့ ငွေကြေးပိုင်ဆိုင်မှု စသဖြင့် ဘာကိုပဲလိုချင်လိုချင် အချိန်တိုင်၊ နေ့ရက်တိုင်းမှာ ရည်မှန်းချက်ကို မမေ့မလျော့ပဲ ရှင်သန်လှုပ်ရှားလိုက်ပါ။
Previous: အမ်ိဳးသမီးေတြေျပာတဲ့ အိပ္ရာထဲမွာ မလုပ္သင့္တဲ့ အရာမ်ား
Next: ေအာင္ျမင္မႈနဲ႔ အလွမ္းေ၀းေစမည့္ အေလ့အက်င့္ (၉)ခု